Dropbox အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.3 | 1,000,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（48.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Dropbox: Cloud Storage, Photo Backup, File Manager
Dropbox သည်မည်သူမဆိုဖိုင်များကိုတိမ်တိုက်ထဲသို့ upload တင်၍ မည်သူမဆိုမျှဝေနိုင်သည်။ မှတ်တမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားဖိုင်များကိုသင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေပါစေသိုလှောင်မှုကိုဖုံးကွယ်ရန်နှင့်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆိုရယူရန်အရန်ကူးယူပါ။ အဆင့်မြင့်မျှဝေသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူမိသားစုများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံသို့မှတ်တမ်းများဝေမျှပြီးဖိုင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်များကိုပေးပို့ရန်လွယ်ကူသည်။
•သင်၏ကင်မရာလိပ်မှဗွီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုအလိုအလျောက်တင်ခြင်း။ လွယ်ကူသောဗီဒီယိုဝေမျှခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံမျှဝေခြင်းအတွက် - နောက်ခံရှိအားလုံးသိုလှောင်ထားသည့်ဓါတ်ပုံသိုလှောင်မှုကိုသိုလှောင်ရန်။
•သင့်အကောင့်ရှိမည်သည့်ဖိုင်ကိုမဆိုအော့ဖ်လိုင်းသို့ဝင်ရောက်ပါ၊ အထူးဆော့ဖ်ဝဲမလိုအပ်ဘဲအမျိုးအစားပေါင်း ၁၇၅ မျိုးကိုကြိုတင်ကြည့်ပါ။
မည်သူမဆိုသင်ပေးနိုင်သည့်လင့်ခ်ကိုကူးယူခြင်းနှင့်ကူးထည့်ခြင်းဖြင့်ကြီးမားသောဖိုင်များကိုအလွယ်တကူပို့နိုင်သည်။ Dropbox အကောင့်မရှိဘူး။
•စာရွက်စာတမ်းများ၊ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၊ ID များ၊ ဓါတ်ပုံများနှင့်ပိုမိုသောအရာများကိုသင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာဖြင့် သုံး၍ အရည်အသွေးမြင့် PDF များသို့ကူးပြောင်းပါ၊ သို့မှသာသင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာကိုအရန်ကူးပြီးဗားရှင်းအဟောင်းနှင့်ဖိုင်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့်အဟောင်းဗားရှင်းများကိုပြန်ယူပါသို့မဟုတ်ဖျက်လိုက်သည့်ဖိုင်များကိုပြန်ယူပါ။
Dropbox Plus အားအခမဲ့ရယူနိုင်ပါပြီ။ သငျသညျ2TB (2000 GB) သိုလှောင်မှုနေရာရရှိမည် - သင်၏ချိတ်ဆက်ထားသောစက်ပစ္စည်းများမှဖိုင်များကိုသိမ်းရန်လုံလောက်သောနေရာဖြစ်သည်။ သင်၏ Plus အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်လည်းသင်၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ။ သင်၏အထိခိုက်မခံဆုံးသောစာရွက်စာတမ်းများကိုစုစည်းရန်နှင့်စုစည်းရန် Dropbox စကားဝှက်များအားသင်၏ကိရိယာများအားလုံးတွင်စကားဝှက်များကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန်နှင့် Dropbox Vault ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ Dropbox Rewind ဖြင့်မည်သည့်ဖိုင်၊ ဖိုင်တွဲ (သို့) သင့်အကောင့်တစ်ခုလုံးကိုရက် ၃၀ အထိပြန်မလှည့်နိုင်ပါ။
လက်ရှိ Plus ဖောက်သည်များသည် Dropbox Professional သို့အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။3တီဘီ (3000 GB) ဖြင့်သင်၏ပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည် - အလုပ်စီမံကိန်းမှသည်ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများအထိသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ သင်နှင့်သင်၏ဖောက်သည်များသည် Dropbox မှထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲဖိုင်အမျိုးအစားအများစုကိုမှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏အလုပ်ကို watermark ဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်၊ မျှဝေထားသော link ထိန်းချုပ်မှုများကိုထည့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင့်အကောင့်ကိုရက်ပေါင်း ၁၈၀ အထိပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ငွေပေးချေမှုမပြီးဆုံးမီ, သင်သည်စျေးနှုန်းကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ ဤငွေပမာဏကိုသင်၏ဂူဂဲလ်ပလေးအကောင့်သို့ကောက်ခံပါမည်။ အစီအစဉ်နှင့်နိုင်ငံအလိုက်ကွဲပြားသည်။ သင်၏အစီအစဉ်ပေါ် မူတည်၍ အက်ပ်တွင်ဝယ်ယူထားသော Dropbox မှာလစဉ်ကြေးသို့မဟုတ်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးသည်။ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သင်၏ subscription သက်တမ်းမကုန်မီအနည်းဆုံး ၂၄ နာရီအတွင်းပိတ်ထားပါ။ သင်၏ဂူဂဲလ်ပလေးအကောင့်ချိန်ညှိချက်များမှအချိန်မရွေးအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုပိတ်နိုင်သည်။
Dropbox သည် Fortune 500 ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သူတို့၏အထိခိုက်မခံသည့်အချက်အလက်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုံခြုံစိတ်ချရသော Cloud ဖြေရှင်းချက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ပေးဆောင်သုံးစွဲသူ ၁၄ သန်းကျော်သည် Dropbox ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေမည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၎င်းတို့လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအပေါ်တွင်မှီခိုနိုင်သည်ကိုသူတို့သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးအတွက် Dropbox သည်သင်၏ All-in-one ဖိုင်သိုလှောင်မှု၊ ဖိုင်စီစဉ်သူ၊ ဖိုင်လွှဲပြောင်းမှုနှင့်ဖိုင်ဝေမျှခြင်းအဖြေဖြစ်သည့် - Android မှ iPhone နှင့် Mac သို့ PC သို့ - ဖြစ်ပါစေ။ ! Dropbox အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ https://www.dropboxforum.com ၀ န်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ https://www.dropbox.com/terms
ဘာအသစ်လဲ Dropbox: Cloud Storage, Photo Backup, File Manager 256.2.6
Cloud Storage not safe from ransomware? Dropbox infected and recovered!
How to transfer data from one cloud to another | Google Drive/OneDrive/DropBox/Box/Amazon S3 (2021)
Best app👍🤝👏👏👏 🇲🇲အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်✊
My Samsung account could